The Somali Dir Clan's History: Codka Beesha Direed: 10/24/18
Xiligii Axmed Gurey 1540 kii Beesha Mareexan wexey Ka Mid Aheyd Beesha Dir Habar Awal Maxamed Xiniftrire- Marrhan Clan Was A Dir Clan 1540 Accouringing to Fatuh Al Habash
1) Xiligii Dawlada Siyad Barre waxaa ay Mareexanka isku dayeen in ay sheegtaan Axmed Gurrey oo shaki ku jirin in uu Dir Yahay.
2) Daroodka sida ay taarikhdooda beenta ah ku sheegan Darood Ismaiil Jabarti wuxuu ka yimid Zaibida, Yeman oo uu ku Aasan yahay Ismaail Jabarti oo dhintay 1645 tii.
3) Axmed Gurey Darood marnaba ma noqon karo waayo Odeygii dhalay Darood Ismail Jabarti wuxuu dhintay oo lagu aasay Zabaida, Yeman 1645kii. Axmed Gurey wuxuu dhintay ilaahey ha u naxariistee 100 dhalashadii Ismaail Jabarti kadib. Marka Taarikhada Darood sax maah, Axmed Gurey ma noqon karo Darood ee waa Dir.
4) 1980 kii beesha Mareexan xiligii Siyaad Barre Dowladii Mareexanka waxa ay isku dayeen in ay Turjumaan Fatuh Al Xabash oo uu Siyaad Barre Af Somali u turjumay. 1983 dii Siyaad Barre ayaa joojiyay in Fatuuha Al Habash lagu qoro Af Somaali buugii la turjumayna waa la gubay. Sababta keentayna waxaa cadaatay buuga Fatuux Al Xabash inuu Darood ku sheego Axmed Gurey iska daa e in uu Mareexanka sheegay in ay ka soo jeedaan beesha Maxamed Xiniftire Dir ee Habar Awal. Arimo badan oo tariikhda Darood aqabad ku noqonaya oo ku tilmaamaya in Mareexan iyo Beelo kale oo Darood ay ka soo jeedaan Dir in ay buuga ku qoran yihiin.
Taarikho badan oo quracan oo ka mid ah Xarla waa Daarood iyo in qabiilka Darood oo dhan gabigiisu uu Dir iyo Hawiye noqdaan looga baqay ayaa joojisay in Fatuux Al Xabash la joojiyo.
Posted by DIRSAME at 7:28 PM 1 comment:
Xiligii Axmed Gurey 1540 kii Beesha Mareexan wexey...